Ngwongwo kacha mma & ihe eji eme ihe na Emeputa | Okwu
Single & Tandem Drives Atọ nke atọ, oghere dị ala na-agba ọsọ, bevel-helical gear unit Ndị otu na tandem draịva dị mma maka ụlọ na akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ewughachi, ekele maka nrụnye dị mfe na ngwa ngwa na obere ndozi chọrọ. Otu echiche na-eme ka otu cylinder draịva nwere otu igwe eletriki nwere otu draịva draịva na ogwe aka. Anyị tandem imewe mere a ụzọ draya cylinders na otu electric moto onwem na a tandem mbanye reducer. Mmiri ...
Atọ atọ, oghere dị ala na-agba ọsọ, bevel-helical gear unit
Ndị otu na tandem draịva dị mma maka mbadamba na igwe na-ewughachi akwụkwọ, ekele maka nrụnye dị mfe na ngwa ngwa na obere ndozi chọrọ.
Otu echiche na-eme ka otu cylinder draịva nwere otu igwe eletriki nwere otu draịva draịva na ogwe aka. Anyị tandem imewe mere a ụzọ draya cylinders na otu electric moto onwem na a tandem mbanye reducer. Drivegbọala ahụ gụnyere ndị na-ebelata ihe ntanetị abụọ, bụ ndị jikọtara ọnụ site na njikọta diski dị nchara na ihe mmeghachi omume na-agba ume. Ebe ọ bụ na njikọ ahụ na-enye ohere naanị ijegharị ejegharị n'etiti nkeji gia, a na-anabata ụfọdụ nkọwapụta ma ọ bụ runout nke akwụkwọ akụkọ cylinder.
Max na-arụ ọrụ ike 300 kW
Kọmpat, vasatail na modular
The tandem mbanye unit nwere ike arụnyere na kehoraizin, vetikal ma ọ bụ diagonal ọnọdụ. The unit bụ kọmpat ma vasatail na dabara kasị draya otu layouts na nha. Ebumnuche a dịkwa modular, yabụ enwere ike iji nnukwu otu dị iche iche chụọ otu nnukwu otu. Ejikọtara ndị na-agba ọsọ draịva na sistemụ etiti etiti. Mmanụ a chọrọ bụ lita 8 / nkeji maka ihe ọ bụla gia, yabụ 16 l / min maka ụgbọala tandem. Kọmpat lubrication nkeji gụnyere mmanụ tank, nfuli, ngwa nju oyi na instrumentation dị ka nhọrọ. Draya cylinder uzuoku njikọ nwere ike na-akwado ma ọ bụ site a gia unit ụlọ ma ọ bụ a iche iche support etiti. Isi njikọ dị n'agbata igwe eletriki na tandem draịva nwere ike ịbụ igwe elu ụwa, njikọta agbatị agbatị ma ọ bụ njikọ diski nchara. Enwere ike ịnye njikọ na nchekwa nchekwa iji hụ okwu ọ bụla na mkpa ya pụrụ iche.
Nke gara aga: Yankee sịlịnda draịva gearboxes
Osote: X mpịakọta mmanụ film biarin ohia bushing
Yankee sịlịnda draịva gearboxes